Beijing university o - Английский - Бирманский Переводы и примеры
Вы искали: beijing university of science (Английский - Бирманский)
Large studies are underway at Duke University and the University of Oxford.
ဒု(ခ်)တက္ကသိုလ်နှင့် အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်တို့တွင် လေ့လာမှုအကြီးစားများ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 24 ရက်ဝန်းကျင်ခန့်တွင် ဩစတေးလျနိုင်ငံရှိ Queensland တက္ကသိုလ်က ကိုယ်ခံအား တုံ့ပြန်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးရန်အလို့ငှာ ဗိုင်းရပ်စ်၏ ပရိုတိန်းများကို မျိုးရိုးဗီဇအရ ပြင်ဆင်ပေးမည့် molecular clamp ကာကွယ်ဆေး၏ ဖြစ်နိုင်ခြေကို စူးစမ်းလေ့လာနေကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
News.com.au ၏ အစီရင်ခံစာ တစ်စောင်တွင် Queensland နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ လက်လီအရောင်းကျွမ်းကျင်သူ ဒေါက်တာ Gary Mortimer က ကုန်စုံဆိုင်များအနေဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများအား ညစဉ်ညတိုင်း ဖြည့်တင်းနေသည်ဟု ပြောဆိုသည်။
Though the virus is not generally airborne, the National Academy of Science has suggested that bioaerosol transmission may be possible and air collectors positioned in the hallway outside of people's rooms yielded samples positive for viral RNA.
ဗိုင်းရပ်စ်မှာ အများအားဖြင့် လေထဲရှိအမှုန်အမွှား မဟုတ်သော်လည်း အမျိုးသား သိပ္ပံ အကယ်ဒမီက ဇီဝလေအမှုန် ကူးစက်မှုမှာ ဖြစ်နိုင်ပြီး လူအများ၏ အခန်းအပြင်ဘက်ရှိ စင်္ကြံတစ်လျှောက်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် လေစုစက်များမှ လေနမူနာများတွင် ဗိုင်းရပ်စ်၏ RNA ကို ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ရှိ အကိုးအကားပေါ်အခြေခံသော ဆေးပညာစင်တာမှခန့်မှန်းရာတွင် ရောဂါပျံ့ပွားမှုအတွက် အသေအပျောက်ဖြစ်နိုင်ခြေသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 0.1% နှင့် 0.39% အကြား ရှိကြောင်း ထင်မြင်ချက်ပြုသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံတွင် 2020 ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ 24 ရက်ခန့်က Saskatchewan တက္ကသိုလ်ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ဆေး စင်တာ (VIDO-InterVac) က 2021 ခုနှစ်တွင် လူသားများတွင် စတင်စမ်းသပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကို ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မတ်လအကုန်ခန့်တွင် ကနေဒါအစိုးရက Medicago နှင့် Saskatchewan တက္ကသိုလ်ကဲ့သို့သော ကနေဒါ ကုမ္ပဏီများနှင့် တက္ကသိုလ်များတွင် ကာကွယ်ဆေးသစ်အမျိုမျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း အပါအဝင် COVID-19 ကို တိုက်ထုတ်နိုင်မည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းများအတွက် သုတေသနပရောဂျက်ပေါင်း 96 ခုအတွက် ရန်ပုံငွေ ကနေဒါဒေါ်လာ 275 မီလီယံ သုံးစွဲမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါသည်။
စတီဖင် ဂရစ်ဖင်၏ အဆိုအရ လိဒ် တက္ကသိုလ်မှ ဗိုင်းရပ်စ်ဗေဒ ပညာရှင်တစ်ဦးက “နှာခေါင်းစည်းများတပ်ဆင်ခြင်းသည် လူများကိုလက်ဆိုင်ရာ တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေး ကောင်းမွန်စွာ မရှိပဲ ရောဂါကူးစက်မှု၏ အဓိက အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော သူတို့၏ မျက်နှာများကို ထိတွေ့မှု လျော့ကျစေနိုင်သည်” ဟု ပြောသည်။ နှာခေါင်းစည်းများသည် ရောဂါပိုး ရှိနိုင်သော သူကို စောင့်ရှောက်သော သူများအတွက်လည်း အသုံးပြုရန်လည်း အကြံပြုထားသည်။
2020 ခုနှစ်၊ ဧပြီလ2ရက်နေ့တွင်၊ ပစ္စဘတ်တက္ကသိုလ် ဆေးကျောင်းရှိ စူးစမ်းလေ့လာသူများသည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ကြွက်များတွင်စမ်းသပ်သော PittCoVacc စမ်းသပ်ခြင်းအကြောင်းကို သတင်းပို့ခဲ့ပြီး၊ “MNA သည် [ကြွက်များတွင်] ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်2ပတ်တွင်စတင်ကာ သိသာထင်ရှားလာခဲ့သော ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် ရောဂါဖြစ်စေသည့်ပဋိဇီဝဓာတ်-သီးခြား ကာကွယ်ဆေးကို ထုတ်ယူစေနိုင်သည့် SARS-CoV-2 S1 ယူနစ်ခွဲကာကွယ်ဆေးကို ဆောင်ကြဉ်းပေးခဲ့ပါသည်။” ဟု ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
In 2008,astudy was conducted by the University of Westminster, London, and sponsored by the paper-towel industry the European Tissue Symposium, to compare the levels of hygiene offered by paper towels, warm-air hand dryers and the more modern jet-air hand dryers.
2008 ခုနှစ်တွင် တစ်ရှူးစက္ကူ၊ လေပူ လက်အခြောက်ခံစက်များနှင့် ပိုမိုခေတ်မီသည့် လေမှုတ် လက်အခြောက်ခံစက်များ၏ ရောဂါကာကွယ်နိုင်မှုအတွက် သန့်ရှင်းရေးအဆင့်များကို နှိုင်းယှဉ်ရန် တစ်ရှူးစက္ကူ ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် European Tissue Symposium မှ အကုန်ကျခံပေးသည့် လေ့လာမှုတစ်ရပ်ကို လန်ဒန်၊ ဝက်စ်မင်စတာတက္ကသိုလ်က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် 2020 ပြည့်နှစ် မတ်လ 19 ရက်နေ့၌ ကူးစက်ရောဂါအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေး တီထွင်ဖန်တီးမှုများဆိုင်ရာ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ (CEPI) သည် Institut Pasteur၊ Themis Bioscience (ဗီယင်နာ၊ သြစတြီးယား) နှင့် Pittsburgh တက္ကသိုလ်တို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သုတေသနအဖွဲ့တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ 4.9 သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ကြေညာခဲ့သည်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုတွင် CEPI ၏ စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 29 သန်းအထိ ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
probashi (Английский>Бенгальский)pre carriage by (Английский>Арабский)happy birthday to my dear sister (Английский>Бенгальский)zuppa di pesceecrostacei (Итальянский>Английский)my angel (Английский>Корейский)stern (Английский>Каталонский)an essay on manoparamarskarta (Английский>Непальский)forte eo tempore aqua flumini deficebant (Латинский>Английский)fodit et in fossa thesauros condit opaca, (Латинский>Английский)welcome please remove your shoes outside (Английский>Бенгальский)top 10 bad words in tamil (Тамильский>Английский)salam damai sejahtera (Индонезийский>Испанский)schiebe (Немецкий>Английский)vorrei informarla che (Итальянский>Английский)vinner (Шведский>Турецкий)fruatur (Латинский>Английский)y should i try again (Английский>Телугу)your vibe attracts your tribe (Английский>Португальский)sweet paprika (Английский>Венгерский)fornacem (Латинский>Английский)tumpang sari (Индонезийский>Английский)Отправ фото (Русский>Французский)kvet (Словацкий>Английский)firmo mentis (Латинский>Английский)saltkringler (Норвежский>Турецкий)